यसकारण शनिबारको रात महिलाहरु बढी रो` मान्टिक हुनेरहेछन ! जान्नुहोस - Info Nepal
INFONPLरोचकयसकारण शनिबारको रात महिलाहरु बढी रो` मान्टिक हुनेरहेछन ! जान्नुहोस
यसकारण शनिबारको रात महिलाहरु बढी रो` मान्टिक हुनेरहेछन ! जान्नुहोस
यसकारण शनिबारको रात महिलाहरु बढी रो` मान्टिक हुनेरहेछन !
जान्नुहोस, यौ.., लाई लिएर विश्वमा हरेक दिन नयाँ र अनौठो तथ्य सार्वजनिक हुने गर्दछ । बेलायतमा गरिएको एक सर्वेक्षणले शनिबारको रात महिलाहरु सबैभन्दा बढी से.., हुने गरेको रहस्य बाहिर ल्याएको छ ।
बेलायतको हेल्थ एण्ड ब्युटी रिटेलर सुपर डगको अध्ययनअनुसार धेरै महिला सातामा एकदिन आफूलाई आफ्नो का-बुमा राख्न सक्दैन । त्यो दिन भनेको शनिवारको रात हो । अध्ययनका अनुसार महिला आफुलाई ‘सि`ड’क्टि`व फि’ल’ गराउन विभिन्न तरिका अपनाउँने गर्दछन ।
उनीहरू शनिवारको रातलाई विशेष बनाउन तातो पानीले नुहाउने, नयाँ कपडा लगाउने र पु`श अ`प ब्रा’“ लगाउन मन पराउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सोही रात उनीहरुले राम्रो हेयर स्टाइल र से.., स्माइल बढी प्रयोग गर्ने गरेको अध्यनमा भनिएको छ ।
दुई हजार महिलामा गरिएको सर्भेमा आधाभन्दा बढी महिलाले परफ्यूम पनि प्रयोग गर्दछन, जसले आफ्नो पा`र्ट`नरलाई प्रभावित पार्न सकियोस् । उक्त समयमा महिलाहरुले से.., लुक पाउन नियमित व्यायाम गर्ने, टा`इ`ट फि`टि`ङ कपडा लगाउने, शर्ट स्क`ट र गहना लगाउनले पनि सर्भेका क्रममा भेटिएका हो । एजेन्सी
अचम्म तर सत्य ! एक महिलाको गर्भमा एकैसाथ १३ सन्तान
सुर्खेतमा एक बाख्राले गर्यो यस्तो चमत्कार, थाहाँ पाउँने सबैजना परे चकित !
म:म खादा म:मकाे डल्ला अ`ड्किएर एक पुरुषको मृ`त्यु भएपछि अस्पतालले जारी गर्याे यस्तो सूचना !
एक प्याकेट क`ण्डमको मूल्य एक लाख रुपैयाँ, तरपनि किन्नेको लाग्यो यति लामो लाईन